Ngake ngabona amagama alandelayo kaNkulunkulu lapho ngenza umthandazo wami wokunikela umoya wami: “Uyilungisa kanjani imvelo yakho? Okokuqala, kumele wazi imvelo yakho futhi kumele uqonde kokubili izwi nentando kaNkulunkulu. Ungakuqinisekisa kanjani ke, ngezinga eliphezulu, ukuthi uyakugwema ukwenza izenzo ezingalungile, wenza lokho kuphela okuvumelana neqiniso? Uma ufisa ukwenza ushintsho, kumele ukucabange lokhu. Ngemvelo yakho enephutha, yikuphi ukukhohlakala ekwenzayo futhi yiziphi izenzo ezenzayo, iyiphi ke indlela engenziwa futhi kungenziwa kanjani ukuze ilawulwe—lona umbuzo obucayi. …U-Lin Zexu wayethukuthela ngokushesha. Ngenxa yobuthakathaka bakhe wabhala lesi siqubulo esilandelayo ekamelweni lakhe: ‘Bamba Intukuthelo Yakho.’ Le indlela yomuntu, kunjalo iyasebenza ngempela. Umuntu ngamunye unezimiso zakhe angazilandela, ngakho kumele ubeke izimiso ngokuqondene nemvelo yakho. Lezi zimiso zibalulekile, ukungabi nazo akulungile. Lokhu kumele kube yisiqubulo sakho sokukholelwa kuNkulunkulu nendlela yakho yokuziphatha.” (“Ukulungisa Imvelo Nokwenza Iqiniso” Emibhalweni Yezinkulumo ZikaKristu). Amazwi kaNkulunkulu anginikeza indlela esheshayo engangingayithatha. Ngaqonda ukuthi: Ukuze ngishintshe isimo esihlubukile, ngakolunye uhlangothi kufanele udle futhi uphuze njalo amazwi amayelana noNkulunkulu edalula umongo womuntu okhohlakele, kolunye futhi uhlangothi kufanele ugxile esiqubulweni sokulawula imvelo yakho ukuze ukwazi ukulawula ngokucacile izambulo zemvelo yakho ngaleyo ndlela ushiye isimo sakho ukuze wenze iqiniso. Yingakho, ngokuhambisana namaphuzu enkohlakalo yami njengesimo sami sokuzikhukhumeza, ukuzazi njengolungile, nokungazimiseli ukulalela imibono yabalingani bami engisebenza nabo, ngazakhela isiqubulo: “Ayikho intwanyana yobulongwe engaqholosha ngayo ngaphandle kwephungana elithile.” Noma yinini lapho ngiveza umbuzo kubalingani bami engisebenza nabo, ngangiqale ngisebenzise lesi siqubulo ukuze ngizixwayise, ngikhumbule ngokugqamile ukuthi umongo wami ubulongwe nokuthi umzimba wami wonke wembozwe yiphunga. Ngangiphinde ngikhumbule futhi nokuthi ngangidale kanjani izinkinga eziningi ngenxa yokuqholosha kwami nokugcwala umina, kanye nokuthi yayingekho into okwakufanele ngiyiqholoshele. Ngaleyo ndlela, ngangingeke ngihlale ngithi konke engikushoyo yikho okulungile, futhi kwakuzonginikeza intwanyana yenhliziyo efunayo, okungenza ngizimisele ukuzehlisa nokulalela imibono yabanye. Kwesinye isikhathi ngangisafuna ukuphikisa imibono yabanye, kodwa uma nje ngicabanga ngesiqubulo, ngangizimisela ukushiya umina ngiphile iqiniso lokusebenzisana ngokuzwana.
Emva kwesikhashana, ngathola ngingazelele ukuthi, lapho ngizehlisa, ngangithola ukukhanyiselwa okuthile kukaMoya oNgcwele kanye nokwambulelwa ngamazwi avela kubalingani engisebenza nabo, futhi ngibone amanye amaphuzu angasile endleleni engangamukela ngayo iqiniso. Ngesikhathi esifanayo futhi, ngaphinde ngathola amanye amaphuzu amahle ngabanye, futhi ngangizimisele ukufunda kubona ukuze ngizithuthukise. Futhi angizange ngicabange ukuthi ngingcono kunabanye abantu kukona konke futhi ngalehlisa ikhanda lami elizidlayo. Ukwenza lokho okwakuphikisana nentando yami akuzange kuzwakale kubuhlungu njengalokhu kwakunjalo ngaphambilini, futhi ngezwa kusuka enhliziyweni ukuthi ukuzehlisa nokulalela ngesizotha imibono yabalingani engisebenza nabo kwaba kuhle kakhulu, hhayi nje ukuhlomula ngenqubekelaphambili yempilo yami kodwa kanye nokuphucula imiphumela yomsebenzi wethu ngokusizana lapho abanye besilele khona kanye nokuhlangana sibe munye.
a. Lin Zexu (NgoNcwaba 30, 1785–Ulwezi 22, 1850) wayeyisazi somdabu wase-China futhi eyisikhulu sobukhosi bama-Qing.
Okwedlule：Akulula Ukuzazi Ngeqiniso
Ubunjalo bomuntu omuhle Ngempela Ukuqonda Ngokusindiswa Lokhu Ukwenza Iqiniso Ngeke Ngiphinde Ngivalwe Amehlo Yizinhloso Ezinhle